DigiCal bụ kalenda zuru oke dị ka ihe ọzọ na Kalịnda Google | Gam akporosis
Oge ọ bụla anyị nwere ike isiri anyị ike chọta ọhụrụ ngwa nke ahụ na-eme ka ndị dị ugbu a ka mma. Enwere ike ọ bụghị na ị dị mkpụmkpụ nke echiche, kama ọ bụ na ngwa ndị kachasị ewu ewu dị mfe iji tinye ndị guzobere na ngwa ọhụrụ, yabụ enwere ndị mmepe na-anaghị enyefe onwe ha njem a iji hụ etu esi etinye ụdị echiche a n'ọrụ: kalenda, keyboard ma ọ bụ mkpu oti mkpu.
N'ọnọdụ ọ bụla, enwere ọtụtụ ndị ọzọ na-amalite njem ahụ na obere ihe ịga nke ọma ma ọ bụ karịa na ọdịda ngwa ngwa siri ike. Ejiri kalenda kalenda na-achịkwa ọtụtụ, yana Kalịnda Google dị ka isi iyi maka ọtụtụ ndị ọrụ mgbe a bịara n'ịhazi usoro ihe omume na nhọpụta nke izu. DigiCal bụ ngwa arụnyere n'ọtụtụ ọnwa na Playlọ Ahịa Google ma kwụpụta maka inye a ụdị dị iche iche nke adịghị na Kalịnda Google, dị ka echiche kalenda 7 dị iche iche, isiokwu gbara ọchịchịrị na nke ọkụ ma ọ bụ ọtụtụ wijetị ọ nwere iji gboo mkpa nke onye ọrụ ọ bụla.
1 Ngwa enyere ihe di nkpa
2 Inweta ya n'ụzọ ziri ezi n'ọtụtụ ebe
Ngwa enyere ihe di nkpa
Dịka m kwuru, e ji Digical gosipụta atụmatụ ndị na-anọghị na Kalịnda Google. Nke a bụ ihe mere eji gosipụta ya dịka ezigbo ihe ọzọ maka ngwa nke adịlarị arụnyere otu nde ugboro na Playlọ Ahịa Google. Ọ nwere ezigbo ntụle na nyocha dị mma sitere na ọtụtụ ndị ọrụ.
Otu n'ime atụmatụ ndị ahụ anyị nwere ike ịhapụ na Kalịnda Google bụ: asaa dị iche iche kalenda, isiokwu gbara ọchịchịrị na nke ọkụ, ọtụtụ wijetị, amụma ihu igwe agbakwunyere, usoro njikwa ịkpọ oku na ihe karịrị kalenda ọha na eze maka njikọta na atụmatụ nke onwe ma ọ bụ nke ụlọ ọrụ.
Ihe omimi nwere ugwo ugwo, Digical +, nke na-agbakwụnye echiche kwa afọ, wijetị ndị ọzọ, mmezi mgbakwunye na ahụmịhe mbipụta n'efu maka otu ugwo nke € 4,99.
Inweta ya n'ụzọ ziri ezi n'ọtụtụ ebe
El digical kwa ụbọchị planner Ọ nwere ụdị ihe ịga nke ọma na-aga nke ọma mgbe e gosipụtara ya n'ụzọ dị ọcha. A na-etinyekwa echiche dị iche iche iji mee ka usoro ihe omume mee ngwa ngwa ma dịkwa mfe. Hazi usoro ihe omume na onye nhazi na-echekwa oge iji nwee ndị nke ụbọchị, izu, ọnwa ma ọ bụ afọ. N'ihe gbasara sekọnd, ị nwere ike ịhụ ngwa ngwa anyị nwere ike ịbanye na ụbọchị ụfọdụ, ma ọ bụrụ na mmadụ ejirila isiokwu 9 dị maka wijetị, site n'otu desktọọpụ ị nwere ike ijikwa ihe niile.
Site na oge mbụ na ngwa ahụ, ị ​​nwere ike ịhọrọ n’agbata isiokwu kalenda abụọ gbakwunye otu ụdị maka mmemme ahụ. N'ụzọ dị otú a ị nwere ike ịhazi onwe gị otu ị ga-esi jiri kalenda ị họọrọ.
Site n'akụkụ igodo nsoro ụzọ ị nwere ike ịnwetas echiche site burukwa, ụbọchị, izu, kwa izu burukwa, ọnwa, ọnwa, ederede, na afọ, yana ịchọ ma ọ bụ na-eme ka kalenda niile dị na ekwentị gị, dị ka ọtụtụ akaụntụ Google ma ọ bụ nke ngwaọrụ ahụ n'onwe ya.
Omume ya ndị ọzọ bụ ikike ọ na-enye iji nweta ruo ihe karịrị kalenda 560.000 maka ezumike, ihe omume egwuregwu na mmemme tiivi, ka ị nwee ike itinye ha na atụmatụ nke aka gị ma atụfula ihe ọ bụla. Enwere ike ịgbakwunye ozi gbasara ihu igwe na onye nhazi iji gosi ọnọdụ okpomọkụ, iru mmiri, mmiri ozuzo, nrụgide nke ikuku, igwe ojii, ikuku, ma ọ bụ ọwụwa anyanwụ na ọdịda anyanwụ.
A karịa kalenda na-aga nke ọma maka gam akporo nke ị nwere ike igosipụta usoro omume ọma nke Kalịnda Google enweghị yana nke ahụ na Kalịnda Digical ị ga-enwe site na oge mbụ ị wụnye ya na Playlọ Ahịa Google n'efu. Ọ bụ ọbụna na nso nso a ka emelitere ya na isiokwu gbara ọchịchịrị Ihuenyo AMOLED, ọ bụ ezie na nke a maka ụgwọ a na-akwụ ụgwọ.
Developer: Ndị Digibites
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Kalịnda DigiCal bụ ngwa nwere ọtụtụ atụmatụ adịghị na Kalịnda Google